Maamul Goboleedyada oo ka shiri doono arimo lagu eedeeyay – Hornafrik Media Network
Bisha soo socota ee March ayaa la filayaa in Magaalada Garowe ay ku kulmaan Golaha iskaashiga ee Dowlad Goboleedyada kuwaas oo casuumad ka helay madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Golahaan ayaa Magaalada Garowe ku yeelan doono shirkooda labaad kadib markii la aas aasay bishii November sanadkii tagay xiligaas oo madaxda maamul goboleedyada iyo Madaxda Dowlada Dhexe uu kala dhaxeeyay khilaaf Siyaasadeed oo dib loo xaliyay.
Shirkaan ayaa la ogeen waxa looga hadli doono, laakiin warar hoose oo ay heshay hornafrik ayaa tilmaamaya shirkaas ka furmaya bisha soo socota magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland ay ugu hadli doonaan Golahaha Iskaashiga dowlad Goboleedyada arimo la xariiro dhaqan gilinta qodobadii ka soo baxay shirkii Golaha Amniga Qaran oo maalmihii aan ka soo gudubnay ka dhacay Muqdisho.
Madaxda maamul Goboleedyada ayaa horay loogu eedeeyay in aysan dhaqan gilinin qodobada ka soo baxa shirka ay yeeshaan Golaha Amniga Qaranka.
Ciidamada Badda Soomaaliya oo u dabaal dagaya sanad guuradoodii